Atletisma – JOJ 2018: laharana fahefatra ny malagasy | NewsMada
Atletisma – JOJ 2018: laharana fahefatra ny malagasy
Nifaninana tamin’ny taranja atletisma, dingana voalohany, nandritra ny lalao olympika ho an’ny tanora, tontosaina any Arzantina, ny talata 11 oktobra lasa teo Rakotomalala Christel. Azo lazaina ho tsy nitsanga-menatra ny solontena malagasy tamin’ity taranja ity.
Laharana fahefatra amin’ny taranja atletisma, hazakazaka 400 metatra, sokajy lehilahy no nisy an’i Rakotomalala Christel, nisolo tena an’i Madagasikara amin’ny JOJ 2018. Na dia mbola tsy tafiditra ao anatin’ny 3 voalohany aza izy, azo lazaina ho efa niady mafy ihany satria, nisongona mpihazakazaka 3 ity atleta malagasy ity. Vitan’i Chirstel tao anatin’ny 54, 31 sengodra ny 400 metatra raha toa ka 0, 261 ny “temps de reaction”.
Tsy dia nisy elanelanelana firy ny fe-potoana ho an’ireo telo voalohany tamin’ity fifaninanana ity. Tafapetraka eo amin’ny laharana voalohany ilay teratany meksikana, i Aviles Ferrerio Luis Antonio. Manaraka azy, eo amin’ny faharoa kosa, i Bell Keegan, teratany aostraliana ary i Hernandes Mendes da Silva Youglas, altela breziliana no mamarana ny telo voalohany.
Marihina fa ny alahady 14 oktobra izao no hiditra amin’ny dingana faharoa ny fifaninanana atletisma, amin’ny hazakazaka 400 metatra.